काँडाको मुकुट लगाईएको, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
जब येशूलाई मृत्युदण्ड पाउन लायकको अपराधको अभियोग लगाइयो, तब सिपाहीहरूले काँडालाई भाँडामा हाले अनि एउटा टाउकोमा राखिदिए। (यूहन्ना १:19,2:१) तिनीहरूले बैजनी वस्त्र लगाइदिए र उहाँको खिल्ली उडाए: "यहूदीहरूका राजा, अभिवादन!" जब उनको अनुहारमा थप्पड लगाईरहे र उनको खुट्टामा हिर्काए।
सिपाहीहरूले आफैंलाई खुशी पार्न यो काम गरे, तर सुसमाचारका पुस्तकहरूमा येशूको कथाको महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा यस कथालाई समावेश गरिएको छ। मलाई लाग्छ कि उनीहरूले यस कथालाई बिच्छेद गरे किनकि यसमा विडम्बनापूर्ण सत्य छ - येशू राजा हुनुहुन्छ, तर उनको शासनकाल अस्वीकार, उपहास र पीडाको अगाडि हुन्थ्यो। उहाँसँग काँडाको मुकुट छ किनकि ऊ पीडाले भरिएको संसारको शासक हो र यस भ्रष्ट संसारको राजाको रूपमा उसले पीडा भोगी आफै शासन गर्ने अधिकारको प्रदर्शन गर्‍यो। ऊ काँडाले छोपेको थियो मुकुट (केवल ठूलो दुखाइ द्वारा) (उसलाई अख्तियार दिइयो)।
हाम्रो लागि पनि महत्व
काँडाको मुकुट हाम्रो जीवनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ - यो केवल चलचित्र दृश्यको भाग मात्र होईन जसमा येशू हाम्रो उद्धारकर्ता बन्नुभयो भन्ने कष्टबाट हामी अभिभूत हुन्छौं। येशूले भन्नुभएको थियो कि यदि हामी उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छौं भने हामीले दिनहुँ हाम्रो क्रूस लिनु पर्ने थियो - र उहाँले सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि हामीले काँडाको मुकुट लगाउनु पर्छ। हामी येशूसँग दु: खकष्टको पग्लिएका भाँडामा जडिएका छौं।
काँडाको मुकुटले येशूको लागि अर्थ राख्छ र यसले येशूलाई पछ्याउने सबैको लागि अर्थ हुन्छ। उत्पत्तिले वर्णन गरेझैं आदम र हव्वाले परमेश्वरलाई तिरस्कार गरे र आफैलाई खराबी र खराबी सिक्ने निर्णय गरे।
राम्रो र नराम्रो बीचको भिन्नता थाहा पाउनु गलत होइन - तर दुःख भोग्नुमा पनि धेरै गलत छ किनकि यो काँडाको बाटो हो, दु: खको मार्ग हो। येशू परमेश्वरको राज्यको आगमनको घोषणा गर्न आउनुभएकोले, यसबाट छक्क मान्नु पर्दैन कि परमेश्वर, जो अझै परमेश्वरबाट टाढा हुनुहुन्छ, उहाँलाई इन्कार गर्नुभयो र काँडा र मृत्युले व्यक्त गर्नुभयो।
येशूले यस अस्वीकृतिलाई स्वीकार गर्नुभयो - उहाँ काँडाको मुकुट स्वीकार्नुभयो - तीतो कचौराको एक भागको रूपमा मानिसहरूले कष्ट भोग्नुपर्दछ ताकि उहाँ हाम्रो साथ आँसुको यस संसारबाट उम्कन ढोका खोल्न सक्नुहुनेछ। यस संसारमा सरकारहरूले नागरिकहरूको टाउकोमा काँडा हाल्छन्। यस संसारमा येशूले उनीहरूलाई उनीहरूले गर्न चाहेका सबै कष्टहरू भोग्नुभयो ताकि उहाँ हामी सबैलाई यस ईश्वर र काँडाको संसारबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
आउँदै गरेको संसार काँडाको बाटोमा विजय प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चलाउनेछ - र जसले उसलाई आफ्नो बफादारी दियो उनीहरूले यो नयाँ सृष्टिको सरकारमा प्रवेश गर्नेछन्।
हामी सबै काँडाको मुकुटको अनुभव गर्दछौं। हामी सबैले आफ्नो क्रस लगाउनु पर्छ। हामी सबै यस पतित संसारमा बाँचिरहेका छौं र उनीहरूको दुखाइ र चिन्तामा बाँचिरहेका छौं। तर काँडाको मुकुट र मृत्युको क्रूसले येशूमा उनीहरूको समानता फेला पारेको छ जसले हामीलाई यस्तो प्रश्न गर्नुभयो: “हे कठोर मानिस, र बोझले दबिएका सबै मानिस हो! म तपाईंलाई स्फूर्ति दिन चाहन्छु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोक, र मबाट सिक। किनकि म विनम्र र मुटुको नम्र छु। त्यसैले तपाईं आफ्नो सेलेनियम को लागी आराम पाउनुहुनेछ। किनकि मेरो जुवा कोमल छ र मेरो भारी हलुका छ " (मत्ती १०: १ -11,28 -२०)